स्वच्छता र पुर्खा सम्मानको पर्व ऋषि पञ्चमी - Mechikali News
भदौ शक्ल द्वितीयाको दिन रसिलो, पोसिलो स्वादिष्ट दरसँगै सुरु हुने हरितालिका तीज भदौ शुक्ल पञ्चमीको दिन अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि सकिन्छ । तीजको व्रत अविवाहिताहरूले असल पति प्राप्तिको कामना तथा विवाहिताहरूले पतिको सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको कामना गरेर गर्दछन् ।
ऋषि पञ्चमी व्रत रजस्वला हुँदा छोइछाइको प्रायश्चित्तका लागि गरिने व्रत हो । गणनाअनुसार पञ्चमी भनेको सोह्र तिथिमध्ये पाँचौँ तिथि हो । पञ्चमी भनेको पाँचको समूह पनि हो । हाम्रो शरीर पाञ्चभौतिक अर्थात् वायु, तेज, आकाश, पृथ्वी र जलसहितको छ । ज्ञानेन्द्रिय पाँच छन् । कर्मेन्दिय पाँच छन् । सुन्ने, सँुघ्ने, स्पर्श थाहा पाउने, स्वाद थाहा पाउने, देख्ने गरी तन्मात्रा पनि पाँच छन् । पञ्चमीको व्रतसँग यिनको शुद्धिको प्रसंग पनि जोडिएको देखिन्छ । मानिस स्वस्थ हुन इन्द्रिय र तन्मात्रा दुरुस्त हुनुपर्दछ । यिनैको असन्तुलन नै अस्वस्थता हो ।
हाम्रा पर्वहरू मानिसका यिनै विषयसँगै सकारात्मक मनोविज्ञानका लागि मनाइने गरेको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, तन्मात्रा र भौतिक तत्वहरूको असन्तुलन भए मानिस पूर्ण स्वस्थ हुँदैन । मानिसमा समानता, सद्भाव, सम्मान र सकारात्मक सोच विकास हुन र जीवनमा यिनको अवलम्बन गर्न यस प्रकारको मनोविज्ञान आवश्यक हुन्छ । यसका लागि आहार, विहार, आचार, विचारमा सन्तुलन हुनुपर्दछ । हाम्रा पर्वहरूले दिने सन्देश यिनै हुन् । भेटघाट, खानपिन, पहिरन, नाचगान आदि क्रियाकलाप यिनैलाई ध्यान दिएर गरिनु पर्दछ । तर, हामी आपूm बिगाछौँ अनि, पुर्खा, परम्परा र संस्कृतिका आधारहरूलाई दोष दिन्छौँ ।
तीजको कथा प्रसंग अनुसार महादेव, शिवलाई मन पराएकी पार्वतीको विवाह उनका पिता पर्वतराज हिमालयले विष्णुसँग गरिदिने निधो गरेका थिए । महादेवसँग नै विवाह गर्ने दृढ संकल्प गरेकी पार्वतीलाई उनका साथीहरूले केही समय लुकाएर राखेका थिए । यही साथीहरूबाट लुकाइएको घटना–‘हरिता’ अपहरण गरिएकी वा लुकाइएकी, ‘आलिका’ साथीहरूद्वारा यसरी यो शब्द बनेको हो । मान्यताअनुसार त्यो दिन भदौ शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि परेको थियो, तृतीयाकै अपभ्रंश तीज हो भन्ने भनाइ छ ।
त्यसैदिन लुकेकै ठाउँमा महादेव र पार्वतीको भेट भएको थियो । यस भेटघाटपछि पार्वती घर गएर आफ्ना पितासँग आपूmले महादेवसँग नै विवाह गर्ने दृढ अठोट व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको यो दृढताका कारण विष्णु र हिमालयराज पर्वतले समेत पार्वतीको विवाह महादेवसँग गर्न सहमत भएका थिए । यसैको सम्झनामा महिलाहरूले यस दिन महादेव र पार्वतीको पूजा गरी व्रत बस्ने गर्दछन् । महादेव र पार्वतीको पूजा आराधना गरिने पर्व महिला र पुरुष दुवैले गर्न नमिल्ने कुनै शास्त्रीय प्रमाण भेटिँदैन । पार्वती (महिला) को संकल्प पूरा भएको अर्थमा यसलाई पुरुषहरूले त्यति महत्व नदिएको पनि हुन सक्दछ । तर, महादेवले पनि पार्वती विवाह गर्ने सफलता प्राप्त गरेको खुसीमा पुरुषले पनि समान रूपमा महादेव–पार्वतीको पूजा गर्न नहुने होइन । यसोगर्दा नै महिला–पुरुष समानताको पक्ष बलियो हुने देखिन्छ ।
तीजकै निरन्तरताको रूपमा देखिने ऋषि पञ्चमीको खास प्रसंग भने भिन्न छ । चलन चल्तीमा सँगसँगै जस्तो देखिए पनि यसको सम्बन्ध तीजसँग भएको देखिँदैन । ऋषि पञ्चमी तीजको निरन्तरता होइन । यो महिलाहरूको स्वच्छतासँग र प्रायश्चित्तसँग सम्बन्धित देखिन्छ । शास्त्रीय प्रावधान भने सप्तर्षि पूजा पति–दुवैले गर्नु भन्ने छ । रजस्वलाजन्य अशुद्धिको विषय भएकोले महिलाहरूले मात्र गर्ने चलन चलेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । श्रीमद्भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको कथा (छैठौँ स्कन्धको नवौँ अध्याय) अनुसार स्वर्ग र देवताका राजा इन्द्रले विश्वरूप भन्ने शक्तिशाली व्यक्तिको हत्या गरे । त्यस ब्रह्महत्याको पापबाट मुक्ति पाउन उनको पापलाई पृथ्वी, जल, वृक्ष र स्त्रीमा बाँडेको प्रसंग छ । त्यहाँ भनिएको छ–
ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपिश्वरः । संवत्सरान्ते तमघं भूतानां स विशुद्धये अर्थात् राजा भए पनि इन्द्रले हात जोडेर स्वीकार गरेको त्यस ब्रह्महत्याको पापलाई एक वर्षपछि शुद्धिका लागि पृथ्वी, जल, वृक्ष र स्त्रीमा चार भाग लगाए । पृथ्वीमा मरुभूमिको रूपमा यो देखिन्छ । वृक्षमा काट्दा आउने चोपका रूपमा देखिन्छ । जलमा फोका र फिँजका रूपमा देखिन्छ ।
स्त्रीमा परेको भागका सन्दर्भमा भनिएको छ–
शश्वत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहु स्त्रियः । रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते अर्थात् सधै काममा सक्षम स्त्रीले स्वीकार गरेको चौथो अंश पाप प्रत्येक महिना रजका रूपमा देखिन्छ । (श्रीमद्भागवतमहापुराण, षष्ठम स्कन्ध, नवम अध्याय, श्लोक ९, गुडविल प्रकाशक तथा वितरक)
यसरी प्रत्येक महिना महिला रजस्वला हुँदा देखिने रजलाई इन्द्रले गरेको पाप (अपराध) को रूपमा बताइएको छ । यसबाट सिंगो महिला नै अपवित्र हुने विषय नभई देखिने, बग्ने रजमात्र दूषित हुने स्पष्ट हुन्छ । अरुले गरेको अपराधको भारी अरुलाई बोकाउने विषय न्यायसंगत हुँदैन । शास्त्र भनेको विज्ञान हो र विज्ञान कहिल्यै अन्यायी हुँदैन । अर्को, त्यस रजको उपयुक्त व्यवस्थापन र शारीरिक सरसफाइ र स्वच्छताको विषय भएको बुझिन्छ ।
मानव समाजलाई सुव्यस्थित बनाउन विभिन्न समयमा विभिन्न नियमहरू बनाइए । ती नियमहरू देश, काल, परिस्थितिअनुसारका बनाइए । नियमहरू कडा बनाइए । राज्यको उत्पत्ति नभइसकेको हुनाले ठूलो प्रकृतिका दण्डसजाय नर्क जाने र त्यहाँ यातना भोग्नुपर्ने, अर्को जन्ममा अझ बढी कष्ट भोग्नुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने विषय राखिएको देखिन्छ ।
केही प्रश्न त फेरि पनि उठ्छ–के इन्द्रले विश्वरूपलाई मार्नुअघि महिलाहरू रजस्वला नै हुँदैन थिए ? यदि यस्तो हो भने प्राकृतिक प्रजनन कसरी हुन्थ्यो ? कहीँ, कसैमा कुनै अपवाद घटनाबाहेक यस्तो सम्भव छैन । यसबाट के थाहा हुन आउँछ भने मानिसले महिला रजस्वला हुने कुरा पछिसम्म पनि थाहा पाएको रहेनछ । थाहा नपाउनु अपराध होइन, तर अज्ञान त हो । कुनै समयको कुनै घटनाविशेषसँग जोडिएको विषयलाई शाश्वत बनाउनु सही हुन सक्दैन । अज्ञानको निरन्तरतालाई ज्ञानले भंग गरिदिन्छ । अज्ञान बोकेर हिँड्नु अन्धविश्वास हो ।
रजस्वला एउटा विशेष अवस्था हो । यसले महिलाको यौवन आगमनको संकेत गर्दछ । प्रजननका लागि तयार हुने कुराको संकेत गर्दछ । शरीरबाट नियमित रूपमा रजको रूपमा रगत बग्नु र त्यसक्रममा महिलाहरूमा भित्रैदेखि असहज हुनु ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष हुन् । कतिपय महिलाहरूमा महिनावारीका बेलामा निकै पीडासमेत हुने गर्दछ । यी कारणले त्यस्तो अवस्थामा गह्रौँ काम नगर्नु, हिँडडुल नगर्नु, खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिनु आदिका लागि विशेष ध्यान दिन छुनसम्म नहुने (नछुने) गरी व्यवस्थापन गर्नु गलत होइन । सामाजिक कार्यविभाजनका हिसाबले घरधन्दा, भान्सा, पूजा आदिबाट समेत अलग हुनु पनि गलत होइन । पन्छिने, पर सर्ने भन्ने विषयको खास अर्थ छ, तर अपराधीलाईझैँ सिंगो मानिसलाई नै अशुद्ध, अपवित्र भनेर परसार्नु विज्ञानसम्मत छैन ।
पूर्वीय संस्कृतिमा प्रायः मानककै रूपमा लिइने चाणक्य नीतिमा यस्तो लेखिएको पाइन्छ— ‘भष्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति । रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति अर्थात् खरानीले माझ्नाले काँसको भाँडा शुद्ध हुन्छ । तामाको भाँडा अमिलोले माझ्दा शुद्ध हुन्छ । रजस्वला भएर नारी शुद्ध हुन्छन् । बग्नाले नदी शुद्ध हुन्छ ।’ यसरी रजस्वला हुने विषयलाई शुद्धीकरण हुने कुरासँग जोडिएको छ । रजोवती भएकी सिंगो महिला नै अशुद्ध हुने विषय शास्त्रसम्मत छैन । गरुडपुराणमा त महिला सधै शुद्ध रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो यस प्रकार छ–‘सोम शौचं ददौ तासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वदा मेध्यो मेध्यो वै योषितो ह्यतः अर्थात् सोमले पवित्रता, गन्धर्वले सुन्दर वाणि र अग्निले पवित्रता दिएका हुनाले स्त्रीहरू सधै नै चोखा हुन्छन् ।’ (श्री गरुडपुराणम् १९÷९५) महिलाहरू कहिल्यै अपवित्र नहुने, सदा पवित्र रहने प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
भदौको शुक्ल पञ्चमीलाई चलन चल्तीमा तीज पञ्चमी भनिएको भए तापनि मूलतः यो ऋषि पञ्चमी हो । ऋषि भनेका मानव पुर्खा हुन् । यद्यपि, गोत्र प्रवर्तक (वंश विस्तार गरेका) ऋषिहरू धेरै छन् । तर, ऋषि पञ्चमीमा पूजा गरिने ऋषि सप्त ऋषि हुन् । सप्त ऋषि भनेको सात जना ऋषिहरूको समूह हो । यी सातऋषिहरू हरेक कल्पमा फेरिइरहन्छन् । तर, विष्णु पुराणका अनुसार वशिष्ठ, कस्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाजको समूहलाई नै सप्त ऋषि भनिएको छ । ऋषि पञ्चमीका दिन सात ऋषिसँग रहने देवी अरुन्धतीको पनि पूजा गरिन्छ । आफ्ना पूर्वजहरूको सम्झना, मानसम्मान, पूजा गर्नु राम्रो हो । प्रतीकको रूपमा मात्र भए पनि महिला पुर्खा देवी अरुन्धतीको पूजा गर्ने प्रचलनले नारी सम्मान र सहभागिताको सानो रूप देख्न सकिन्छ ।
यही बहानामा स्वास्थ्य तथा स्वच्छता र सरसफाइको विषयले निरन्तरता पाउनु राम्रो पक्ष हो । व्रत भनेको दृढ संकल्प हो । संकल्प केका लागि र कस्तो भन्ने कुरा मानिस स्वयंले बुझ्नुपर्ने विषय हो । पञ्चमीका ब्रतालुहरूले धमिराले उठाएको माटोले शरीर शुद्ध पार्ने, ३६५ पटक नुहाउने, ३६५ दतिवन गर्ने, दाँत माझ्ने आदि गर्दछन् । यसबाट स्पष्ट छ, यस्तो काम दिनदिनै गर्नुपर्दछ । वर्षभरिको गर्नुपर्ने कृत्य एकै पटकमा गर्दा एकै दिन ३६५ नै गर्नुपर्ने भनेको दिनको एकका दरले गर्नु भनिएको हो । यस्तो व्यावहारिक विषयलाई पनि बुझ्ने प्रयत्न नै नगरी अवलम्बन गर्नु अन्धविश्वास हो ।
पूर्वीय संस्कृतिमा एउटा महत्वपूर्ण भनाइ छ, ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अर्थात् धर्मसाधनाका लागि शरीर मुख्य हो ।’ स्वच्छ र स्वस्थ तन स्वच्छ र स्वस्थ मन ! नबुझेर गरिएको कुनै ठूलो कर्मले पनि पूरा फल दिँदैन । जानेर गरिएको सानो कर्मले पनि असल फल दिन्छ । स्वस्थ मन (सोच–विचार) का लागि स्वच्छ तन (शरीर) आवश्यक छ । यस अर्थमा मर्यादित महिनावारीका लागि ऋषि पञ्चमी पर्वको ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । (लेखक संस्कृति अध्येता तथा अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)